WADDANKU SADEX XISBI QARAN KA BADAN MA QAADI KARO | Salaan Media
WADDANKU SADEX XISBI QARAN KA BADAN MA QAADI KARO
Xili badani kama soo wareegin markii xubnanahan la baxay magaca awooda badan “Sixida Xukuumada iyo Badbaadinta Wadanku” ay dhigteen Sanduuqa codka lagu bixinayey goob walba oo ka mid ahayd goobihii codbixinta si ay uga mid noqdaan Sadexda Xisbi Qaran, balse waxay kala yimaadeeni noqotay Gacmo madhan. marba hadii taasi dhacday waxay ahayd inay guuldarada ku timid Ururadoodii ay ku qancaan ” Ninka waxgaradka ahi waakan Guusha iyo Guuldaradaba ogolaado”; balse hadaad aragto nin Guuldaradu u cuntami la’dahay meesha uu u socdo Anigu magaran karo.
U fiirsada Xubnahan dhamaantood waxay ku fashilmeen Tartankii doorashooyinka Xisbiyada, qaarkoodna Xilalkii ay hayeen baa wax uga dhex guuxeen markaasay ka carareen. waxa suurto gal ah in qaarkiin isweydiiyaan Faysal iyo Ucud oo u qaataan Xisbi Qaran, dib u milicsada inta doorasho Faysal galay iyo waxuu kala yimid, tan hada u dambaysay dee Jamaal Ali baa guulaystay oo la doortay balse waxaan daah inaga saarnayn meeshuu Faysal ku dambayn lahaa hadaan Illahay Jamaal u soo diri lahayn.
Xasan Ciise “Xaqsoor”, Muwaadin wanaagsan buu iigu muuqday markuu beelaha darafyada oon ka midka ahay uu u doodayey balse u fiirsada arimahan ugu dambeeyey Xisbigii Kulmiyuu la heshiiyey inuu ka mid noqdo oo uu markii hore caayi jiray. Markii Beelihii uu watay ee darafyadana Wasiiro loogu magacaabay waad maqasheen waxa ka soo yeeray, Waar isaga iyo Faysal isu ekaa.
Dhegaweyne xushmad Abti baan u hayaa balse guuldarada ayuusan ku qancin, taasoo sumcadiisa iyo Sharaftiisaba wax u dhimaysa. Ina Ali koore-na Beeshiisii golaha ha keeno intuusan dhagax ku soo noqonaya tuurin. waxaa muuqata inaydaan wax saxayn balse wax-khaldaysaan, taasna wadanku xiligan uma baahna.
waxaan qoraalkan ku soo gunaanadayaa, Wadanku 3 xisbi Qaran buu leeyahay, intaas ka badana ma qaadi karo ee bal iska suga inta Tobanka Sano ka dhamaanayaa Xisbiyadan, mise da’ ayaa idin soo haysoo baqdin baa idin gashay.
Waxaa Hogaamiyayaasha Xisbiyada Qaramada ee kala ah Ciro, Biixi iyo Jamaal waxaa la gudboon inaan xilalkii aanu u dooranay aysan ka faro-maroojisanin kuwii aanu diidnay ee Codkayaga waayey.
Dalka sixidiisa iyo Ilaalintiisaba Xukuumadaa laga rabaa, waxii ka khaldamana Sadexda Xisbi Qarani waa inay toosiyaan. balse waa inaanan sida Faysal Faras kasta la korin. miyuusan ogayn inuu ka darajo sareeyo nimankan uu daba-fariistay ee Xisbigii Ucud dhulka ku jiiday, mise garashadaa halkaas la martay. Xisbiga Ucud-na waxaa looga fadhiyaa jawaabta ay fudaydka Faysal ka bixiyaan iyo in Xisbigoodii la hoos-geeyo Ururadii hadhay.
Xukuumadu waa inaysan marnaba ogolaanin Ururo Siyaasada ku hadhay oo dadku diiday inay marba shaati Ummadda u soo gashadaan.
Shacabkana waxaa la gudboon inay ka ferjignaadaan xubnaha qandaraasyada ku soo qaatay inay wadanka xasilooni daro geliyaan.
Qasim Aadan Saleebaan